Njem njem mmụta dị egwu na Suriname | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Nduzi, Suriname
Ikekwe Suriname O nwere ike ọ gaghị abụ ebe mbụ na America nke na-abata n'uche mgbe ị na-eche maka ezumike, mana na ndepụta nke osisi na obere ntakịrị ebe ọ ga-abụ nke dabara adaba.
Enwere ndị na-ahọrọ ịga ebe ndị dị ka nke a, ha achọghị ịbanye n'ime njem nlegharị anya ma ha hụrụ n'anya ịchọpụta ọdịdị ala, ndị mmadụ na ọdịbendị na-adịghị mma, dị iche na nke ha na ndị ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke mba ụwa kpọsara. Ọ bụrụ na echiche ahụ dọta gị, ị ga-aga ozi gbasara otu esi eme njem mmụta na Suriname.
2 Ihe ị ga-eme na Syurinam
Ihe mbu bu uzo: kedu mba ọ bu, ebee ka ọ di? Asusu ndi a na-asụ ya? Mma suriname bu Republic nke no northeast nke Atlantic Ocean, n’akụkụ elu nke South America. O bu ya pere mpe n’obodo a na ókèala ya na Brazil na Guyana na French Guyana. O nwere ihe karịrị ọkara nde mmadụ bi na ya na obodo isi obodo a na-akpọ Paramaribo.
Ndị Dutch bụ ndị Europe izizi batara na narị afọ nke XNUMX ma ha nọrọ ebe ahụ na 50s obodo ahu batara na mpaghara nke Netherlands nwere ọkwa ọzọ, ọ bụ ezie na nnwere onwe ruru ya naanị afọ 41 gara aga. Ye mme n̄kpọ emi ẹbe inyan̄ asụsụ gọọmenti bụ Dutch, na mmuta, azumahia, ochichi na ulo oru nta akuko, ma soro ndi amaala na ndi Africa kwabatara, enwere asusu a na-akpo sranan nke bu ihe ama ama.
Suriname a kewara ya na ógbè buru ibu abụọ, ugwu na oke osimiri ya na ala ubi ya, nke bu ebe onu ogugu ndi mmadu bi na ya, na ndida nke nwere oke ohia nke okpomoku na savanna nke gbapuru na Brazil ma nke ahu bu 80% nke ala mba. Bịaru ya nso o nwere ezigbo okpomọkụ na udu mmiri n’afọ niile na iru mmiri n'etiti 80 na 80% na n'etiti 29 na 34 ºC.
E nwere oge mmiri mmiri abụọ, otu n’ime Eprel ruo Ọgọstị na nke ọzọ site na Nọvemba ruo Febụwarị. Enwekwara ndi okpukpu abuo, site n’onwa August rue November na site na February rue April. Iburu n'uche mgbe ị na-eme njem. Ihe ọzọ ị kwesịrị ịma bụ na lee ebe a, gi gbara aka ekpe, dị ka ọ dị n'England. Omenala agbanwebeghị ka ị kpachara anya. Ego mba bụ Suriname dollar ma ọ bụ SRD mana a nabatara dollar US na euro.
Ọkụ eletrik dị 110/127 volts, 60 Hertz ma na nnukwu họtel ma ọ bụ ụfọdụ ụlọ ọ bụ 220 volts. Ihe plọg ahụ, ọtụtụ bụ ụdị Europe nke nwere prongs abụọ. Chọrọ visa? Enwere ihe akpọrọ Kaadị ndị njem na-enye ohere ịbanye ma nọrọ ụbọchị 90. A na-azụta ya na Embasii ma ọ bụ Consulate tupu ị na-eme njem ma ọ bụrụ na ịhapụ Amsterdam n'otu ọdụ ụgbọ elu ahụ ma ọ bụ mgbe ị rutere mba ahụ nwekwara nhọrọ, ọ bụ ezie na ị na-akwụ euro 30. Ọ naghị agbaso paspọtụ mana ọ ga-adịrịrị opekata mpe ọnwa isii.
Ọgwụ mgbochi? Gọọmentị na-atụ aro inweta acha odo odo na ịba ọcha n'anya B, na mgbakwunye na iburu ọgwụ mgbochi maka ịba na dengue.
Ihe ị ga-eme na Syurinam
Ọ bụ ihe dị mkpa ecotourism, iji nweta ndu di iche-iche di iche-iche na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ amaghị nwoke ma ọ bụ nwanyị na-amaghị nwoke nke obodo America a. E nwere ugwu, oke mmiri ozuzo, ọdọ mmiri, osimiri, ubi na ọtụtụ ahịhịa na ụmụ anụmanụ.
Ka anyị hụ ụfọdụ n'ime ogige ntụrụndụ na ọdịdị. Nke mbu bu Ogige Ntụrụndụ Brownsberg ma dịrị kilomita 130 site na Paramaribo. Obi bụ Brownsberg Peak, ugwu nke ndị na-egwupụta Dutch na-egwupụta ihe na narị afọ nke iri na itoolu. Mgbe veins gwụrụ ha gbalịrị bauxite na n'ikpeazụ na 60s saịtị ahụ ghọrọ ebe nchekwa.
Lee ụfọdụ 350dị nnụnụ 1500 na ụdị ahịhịa XNUMX. Enweghị ụkọ toucans na enwe na oge niile enwere mgba iji gbochie ndị na-egwu ọla edo na oke ha n'ihi na ọrụ ahụ na-eyi ihe okike egwu. Kwa afọ a na-eme atụmatụ na e nwere puku mmadụ iri abụọ na-agabiga agagharị na ọtụtụ ụzọ ụkwụ e nwere ebe ị ga-eri nri ma hie ụra na ya 8400 hectare.
Ebe ọzọ bụ Edebere eke gabili, n'ọnụ mmiri Osimiri Marowijne, ókèala ala na French Guyana. O nwere puku hekta anọ na Ọ bụ ebe a mbe na-ete aka ịmụba. Ha rutere n'usoro n'ụsọ osimiri ahụ ma ọ bụ naanị ebe dị na Atlantic ebe nke a na-eme. Ruo ugbu a ị ga-eji ụgbọ mmiri rute ebe ahụ na mgbakwunye na osimiri ị nwere ike ịga obodo ụfọdụ nke ndị Amerindian Indian ebe ha nwere ike ịme ihe omume ụfọdụ nke ndụ ha kwa ụbọchị.
Site na Paramaribo enwere ọtụtụ njem. Otu n’ime ha bụ Njem njem njem Kasikasima nke na-esi n'isi obodo ahụ eru ma rute Palumeu, ebe mgbaba no n’ime oke ohia n'elu Osimiri Tapanahony, nke dịdebere obodo Amerindian nke nwere otu aha. N’echi ya, a ga-eji ụgbọ mmiri gafere n’ime ọhịa nke ga-ewe ụbọchị isii. Kedu maka? Na-agafe ọsọ ọsọ, oke ọhịa, hie ụra n'ogige, ma mechaa rịgoro Ugwu Kasikasima n'ime awa asaa. Echiche dị iche.
Nwere ike ịgbazite nke a na njem ndị ọzọ site na weebụsaịtị ndị njem njem nke Suriname ebe enwere njikọ ndị na-emegharị gị na ụlọ ọrụ ndị njem nyere ikike. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ebe obibi dị oke ọnụ n’etiti oke ọhịa mgbe ahụ ị ga - anwale ya Kabalebo Natural Resort, n'etiti Amazon. Ọ bụ ebe ezumike atọ na ọkara kpakpando, n'akụkụ osimiri nke otu aha ahụ, na ọdịda anyanwụ nke mba ahụ. Ọ bụ ụmụ ụmụ amaala na ndị ohu Africa na-agba ya ma ụbọchị ebe a nọrọ na-achọpụta ihe okike, igwu mmiri na ọdọ mmiri, ịrị, ịnyagharị osimiri, ịkụ azụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na mmiri iyi na-amasị gị enwere ọtụtụ n'ihi na enwere ọtụtụ osimiri: enwere Raleighvallen waterfalls, na Blanche Marie, ndị Wonotobo. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara na mgbakwunye na akụkọ ihe mere eme nke Suriname mgbe ee ma ọ bụ ee, ị ga-achọ gaa na ubi ochie. Otu n’ime ha bụ Asụsụ Laarwijk. Ọ dị na Osimiri Suriname ma ọ bụ naanị ụgbọ mmiri na-enweta ya, ọ ka njọ na enwere ọtụtụ ndị ọzọ, ọbụlagodi isi obodo.
Ọtụtụ bụ ụlọ osisi ochie, weghachite n'ọnọdụ mbụ ha. Nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ mara mma nke ala ubi na mpaghara Commewijne. ya mere ebe a Ọ bụ ihe amamihe ịgbazite igwe kwụ otu ebe iji mara ọtụtụ n'ime ha. Ọ bụ ọnụ ahịa na-eje ije n'ihi na ị gafere a kediegwu akwa, na Jules Wijdenbosch Bridge nke gafere Osimiri Suriname na-esonyere Paramaribo na Meerzorg. Ọ dị 52 mita na 1500 ogologo.
N'ikpeazụ, anyị nwere obere fọdụrụ isi obodo, ọnụ ụzọ mbata na ụzọ ọpụpụ maka ndị ọbịa. Couplebọchị ole na ole ezuola iji leta ya ma mara ya Katidral nke narị afọ nke XNUMX, ụlọ nzukọ ochie ya na ụlọ alakụba ochie na ihe niile dị na ya coloniallọ ndị colonial ejiri osisi na brik rụọ nwere mbara ihu ya na windo ya ndị a tụrụ atụ. Ebe akụkọ ihe mere eme ya mara ezigbo mma ma nwee obi ụtọ na eweghachitere ha banyere 20 ma ọ bụ 30 afọ gara aga.
Ma ọ dịghị akọ ebe e wusiri ike, na Fort Zeelandia, nke e wuru n'okpuru okpueze Bekee na 1651 ọ bụ ezie na mgbe ndị Dutch na-achịkwa ókèala ha nakweere nke Zeelandia.
Kemgbe 1967 ọ bụ ụlọ ngosi ihe nka, ọ bụ ezie na na '80s ọ rụrụ ọrụ n'ime ụlọ mkpọrọ na n'ogige ya, ọbara nke' 80s, afọ nke ọchịchị aka ike, mere. Taa nke dị n’azụ anyị ma enwere ike ileta ya n’ihi na ụlọ ya dị egwu ma echiche ya dị mma. Obodo ochie nke Paramaribo mara ezigbo mma na kemgbe 2002 ọ bụ Ebe Ihe Nketa Worldwa.
Na gafere ihe nketa Europe ebe a na Suriname kwa enwere Javanese, Africa, Indian na China yabụ ị nwere ike ịnwale nri ya niile ma gaa mmemme ọdịbendị dị iche iche. Mgbe ị gụchara ihe a niile wee hụ ọmarịcha ihe oyiyi a, ọ dị gị ka ịmalite njem njem na Suriname?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Suriname » Njem njem dị egwu na Suriname